Local News – Page 10 – WunYan
ထောက်ခံမဲ အများဆုံးရရှိသော ဦးဝင်းမြင့်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်
Posted on March 28, 2018 by whuk-46651
ဒုတိယသမ္မတ ၃ ဦးထဲက နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ဦးဝင်းမြင့် ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက မဲပေးရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်လာတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၃၆ ဦးက လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးရာမှာ ဦးဝင်းမြင့်ကို ထောက်ခံသူ ၄၀၃ ဦး၊ ဦးမြင့်ဆွေကို ထောက်ခံသူ ၂၁၁ ဦး၊ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကို ထောက်ခံသူ ၁၈ ဦးရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၄ မဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ထောက်ခံဆန္ဒမဲအများဆုံး…
မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနမှ စန္ဒရား တင်ဝင်းလှိုင်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Posted on March 27, 2018 by whuk-46651
သို့ ဆရာ စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင်ခင်ဗျား ၁။ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ Myanmar Event Park မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားစဉ် မြန်မာ့ အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား(MRTV) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခြေအနေမှန်ကို သိစေချင်လို့ အခုလို စာရေးသားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ ဆရာပြောတဲ့အထဲက…
ဒုသမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Posted on March 24, 2018 by whuk-46651
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က သမ္မတဦးထင်ကျော် ရာထူးကနုတ်ထွက်တာနဲ့ တချိန်တည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးက နုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဦးဝင်းမြင့်ကို ဒီကနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ အစုအဖွဲ့ အစည်း အဝေးကနေ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။ မခွာညိုက ပြောပြမှာပါ။ လက်ရှိ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဒုတိယသမ္မတ သုံးဦးအနက် ဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ သမ္မတဖြစ်လာနိုင်ခြေ အလားအလာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးဝင်းမြင့်ကို နှစ်ပေါင်း ၄၀…
သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်ဟာ ကျန်းမာရေးကြောင့် အနားယူတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စုစုလွင်က ပြောကြား
Posted on March 23, 2018 by whuk-46651
သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်ဟာ ကျန်းမာရေးကြောင့် အနားယူတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စုစုလွင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ “ကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်ကြတာပေါ့နော်။ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ဆုတောင်းပေးကြတာတွေ တော်တော်လေးပဲ မြင်ရပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ပူပေးတဲ့သူတွေ၊ ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့။ အခု အနားယူမယ့်ကိစ္စကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေတော်တော်များများကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကျော်လောက်က သူ…
ပြောင်းလဲ ကောက်ခံမယ့် အိမ်သုံး လျှပ်စစ်မီတာ နှုန်းထား
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာက အသစ်ပြောင်းလဲ ကောက်ခံမယ့် အိမ်သုံးမီတာ နှုန်းထားတွေကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး အဆိုပါ နှုန်းထားတွေကို လာမယ့် ဘဏ္ဍာနှစ် စတင်မယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ နေ့ကနေ စတင် ကောက်ခံသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသစ်ပြောင်းလဲ ကောက်ခံမယ့် အိမ်သုံးမီတာ နှုန်းထားတွေကို ပုံစံသုံးမျိုး သတ်မှတ်ထားပြီး ကျေးလက်ဒေသသုံး၊ မြို့ငယ်သုံး၊ မြို့ကြီးသုံးဆိုပြီး သုံးမျိုးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေရဲ့ အိမ်သုံးမီတာ…
နိုင်ငံတော် သမ္မတက ဦးဝင်းမြင့်
Posted on March 21, 2018 by whuk-46651
သမ္မတရာထူးမှ နုတ်ထွက်သွားသည့် ဦးထင်ကျော်၏နေရာကို ဆက်ခံမည့်သူမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌဟောင်း ဦးဝင်းမြင့်ဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီနှင့်နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရသည်။ ဦးထင်ကျော် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ထုတ်ပြန်သည့် မတ် ၂၁ ရက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်သည်လည်း လွှတ်တော်ဥက္ကဌတာဝန်မှ အနားယူလိုက်သည်။ ယင်းသို့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ တာဝန်မှအနားယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဝင်းမြင့်က လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်းရှိ ဇမ္ဗူသီရိခန်းမတွင် NLD ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန်…
သမ္မတရာထူး ပြန်လည် ရွေးချယ်မှုနှင့် သမ္မတဦးထင်ကျော် နှုတ်ထွက်ရသည့် အကြောင်းအရင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပြန်လည်ရွေးချယ်မည် Myanmar’s new president Htin Kyaw (L) and National League for Democracy party leader Aung San Suu Kyi arrives to parliament in Naypyitaw March 30, 2016. REUTERS/Stringer EDITORIAL USE ONLY….
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတအဖြစ် ထမ်းဆောင်မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်
​နေပြည်​​တော်​၊ မတ်​ ၂၁။ ကြယ်စင်ခ (နေပြည်တော်) ယနေ့ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် လက်ရှိ အလုပ်တာဝန်များမှ အနားယူလိုသောကြောင့် နုတ်ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ နုတ်ထွက်ခြင်းကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ (၇၃)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)နှင့် အညီ လစ်လပ်သွားသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကို အလုပ်လုပ်ရက် ခုနှစ်ရက်အတွင်း ဖြည့်စွက်နိုင်ရေး အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း…
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် သမ္မတရာထူးက နုတ်ထွက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ဟာ လက်ရှိ အလုပ်တာဝန်တွေကနေ အနားယူလိုတာကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးမှ နုတ်ထွက်သွားကြောင်း သမ္မတရုံးက မတ်လ ၂၁ ရက်စွဲနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ၇၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) နဲ့အညီ လစ်လပ်သွားတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကို အလုပ်လုပ်ရက် ၇ ရက်တွင်း ဖြည့်စွက်နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ…
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် လက်ရှိ အလုပ် တာဝန်များမှ အနားယူလိုသောကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ စ၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရာထူးက နုတ်ထွက်သွားကြောင်း ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ သတင်း ထုတ်ပြန် ထားပါသည်။ Source : Myanmar President…